I-Boxing Gloves Tattoos, Incazelo kanye Nemibono | Ukuzidweba umzimba
Boxing amagilavu ​​tattoos, incazelo kanye nemibono
Akukasa kodwa wena ne-tracksuit yakho empunga senihamba emigwaqweni endaweni encane, ugijima ogwini lolwandle, ukhuphuka izitebhisi eziyizigidi, ukhathele, kodwa ukwazi ukuthwesa umqhele phezulu futhi uphakamise izingalo zakho ngomoya wokunqoba, futhi konke okunokuthi “Iso Lengwe ”ngemuva. Uma uzizwa ukhonjwe ngokugcwele, ama-tattoos wamagilavu ​​wesibhakela angawakho.
Kodwa hhayi u-Rocky kuphela ophila umlandeli we-tattoo, njengoba ama-tattoos wamagilavu ​​​​esibhakela afanekisela ezinye izinto zomuntu siqu kakhulu. Ngalesi sizathu silungiselele lesi sihloko sikhuluma ngencazelo yaso futhi, futhi, sikunikeza imibono eminingi ukuze ikukhuthaze. Futhi uma uzizwa uthanda okwengeziwe, ungakhohlwa ukubheka lesi esinye isihloko mayelana ama-tattoos we-boxer ngesitayela esihlanzekile Isikole esidala!
1 Incazelo yama-tattoos eglavu yesibhakela
1.1 Uthando lwesibhakela
1.2 Isixwayiso kwabanye
1.3 Amandla okulwa
1.4 Avale amagilavu
2 I-Boxing Gloves Tattoo Imibono
2.1 Amagilavu ​​anegama esifubeni
2.2 Amagilavu ​​abomvu, amandla amakhulu
2.3 Ubuhle bamagilavu ​​angokoqobo
2.4 Traditional boxing amagilavu ​​tattoo
2.5 Umshayisibhakela wesintu
2.6 Amagilavu ​​okuhlonipha othile
2.7 cute kakhulu boxing amagilavu ​​tattoo
3 Izithombe ze-Boxing Gloves Tattoos
Incazelo yama-tattoos eglavu yesibhakela
Ama-tattoos lapho umlingiswa oyinhloko angamagilavu ​​wesibhakela anezincazelo ezimbalwa ezingaba khona, ezinye zisobala kakhulu kunezinye. Ngokwesibonelo:
Ngaphandle kokungabaza, incazelo engafika kalula engqondweni ukukhombisa uthando lwethu ngalo mdlalo ngamagilavu, okuyingxenye ewuphawu kakhulu yomfaniswano wabo. Kulesi simo, nakuba i-tattoo ingenayo incazelo efihlekile kakhulu futhi eyimfihlo, ezinye izakhi zingasetshenziswa eziguqula amagilavu ​​abe into yomuntu siqu kakhulu. Isibonelo, ikhophi engokoqobo yamagilavu ​​ethu ingenziwa.
Enye yezincazelo ezidume kakhulu zamagilavu ​​ukuthi angasebenza njengesixwayiso. Ngokungangabazeki, isibhakela ngumdlalo oshubile kakhulu onobudlova obuphezulu, ngakho-ke, ukugqoka amagilavu ​​ane-tattoo kungahunyushwa njengendlela yokumemeza emhlabeni ukuthi ngiyaqaphela ukukuxosha, ngoba uzobuyisela emuva.
Amagilavu ​​wesibhakela futhi Zingaba isingathekiso sempi obekumele siyilwe. Ngokuvamile le tattoo imelela imizabalazo ebalulekile, njengokugula okuthile umuntu odwetshiwe okuye kwadingeka abhekane nakho. Amagilavu ​​esibhakela akhombisa ukulwa njalo, ukumelana, nokunqoba, ukunqotshwa kanzima.
Ekugcineni, I-tattoo ye-boxing gloves enegilavu ​​elengayo ingasho futhi ukuthi sishiye okuthile eceleni noma sesithathe umhlalaphansi.. Ngokuvamile libhekisela emdlalweni, kodwa futhi nomsebenzi noma umsebenzi othile. Ukuthi bangamagilavu ​​esibhakela kukhomba ukuthi sisebenze kanzima manje sekumele siphumule.
I-Boxing Gloves Tattoo Imibono
Nakuba kuyiglavu yesibhakela elula, iqiniso liwukuthi le tattoo ihamba ngendlela ende futhi iguquguquka kakhulu kunokuzwakala kwayo. Ngokwesibonelo, njengoba sizobona ngezansi:
Amagilavu ​​anegama esifubeni
Kuphela kulabo abafuna ukunaka phezulu nge-tattoo yabo yeglavu - indawo enhle yokuya kumklamo omkhulu, odonsa amehlo usesifubeni., lapho, ngaphezu kwalokho, singakwazi ukuhambisana nomklamo oyinhloko wamagilavu ​​ngezwi elipholile ngisho nelide, ngoba indawo ihamba ngendlela ende. Inikeze lokho kuyinkimbinkimbi eyengeziwe ngokusebenzisa umushwana wesiLatini.
Amagilavu ​​abomvu, amandla amakhulu
Impela, Phakathi kwayo yonke imidwebo ye-tattoo efaka amagilavu ​​wesibhakela, uzobona umbala ofanayo ngokuphindaphindiwe, obomvu. Lokhu akukona nje kuphela ukuthi amagilavu ​​alo mdlalo ahlala etholakala kumnyama noma obomvu, kodwa futhi ngenxa yokuthi lo mbala uhlotshaniswa nobudlova nothando, okwenza kube i-protagonist ekahle yalolu hlobo lwama-tattoos.
Ubuhle bamagilavu ​​angokoqobo
Kulabo abafuna i-tattoo ekhombisa ngokuningiliziwe ukubukeka kwamagilavu ​​ebhokisi, akukho okufana namagilavu ​​angokoqobo. Thola umculi ogxile kulesi sitayela ukuze akwazi ukukhiqiza kabusha esikhumbeni sakho konke ukugoqa, ukuguga nokubukeka kwamagilavu ​​akho. Ungaya kumklamo omnyama nomhlophe uma ufuna ukuwunikeza idrama eyengeziwe.
Traditional boxing amagilavu ​​tattoo
Isitayela sendabuko sibukeka sisihle kakhulu ngamagilavu ​​wesibhakela. Eqinisweni, lo mdlalo ungase ube ngowokuqala ukuvezwa njengamatilosi aluhlaza namabhadi ahlukahlukene. Imigqa ewugqinsi nemibala egqamile (futhi, ebomvu njengomlingiswa oyinhloko), kanye nomklamo owenziwe lula, ilungele ukudlulisa umlando wezemidlalo, futhi ibuye ihambisane namanye ama-tattoos alesi sitayela ongase ube nawo.
Futhi asisuki kude nesitayela sendabuko, ngoba abashayisibhakela babukeka bebahle ngaso. Ungakhetha umshayisibhakela ogqoke izingubo zakudala kanye nekhanda lezinwele. Ungaba ngisho nangokwengeziwe futhi ukhethe ezinye izinhlobo ezijwayelekile zalesi sitayela futhi ufake amagilavu ​​​​webhokisi, isibonelo, ama-mermaids, imikhomo, ama-kangaroo, amatilosi, izingulube, amaqhude ...
Amagilavu ​​okuhlonipha othile
Uma okufunayo ukuveza ukuthi othile osondelene kakhulu useqalile ukulwa, khetha amagilavu ​​wesibhakela futhi, isibonelo, igama labo. Uma ungafuni ukuba sobala kangako, ungaphinda ukhethe into ejwayeleke kakhulu kulowo muntu bese wengeza amagilavu ​​ekwakhiweni, isibonelo, uma uthanda ama roses ungawahlanganisa. Khumbula ukuthi umdwebi we-tattoo angakusiza kakhulu ukuhlanganisa izakhi ezahlukene ukuze umklamo ubukeke kahle.
cute kakhulu boxing amagilavu ​​tattoo
Akufanele sikukhohlwe lokho amagilavu ​​wesibhakela ahlukahlukene kakhulu, yingakho sigcine sinalo mklamo omuhle one-boxing walrus kulabo abafuna ukuphefumulelwa umklamo okhangayo futhi okhanyayo we-tattoo yabo elandelayo. Ngesitayela sekhathuni, imibala kufanele igqame futhi imigqa ibe mncane kancane.
Sithemba ukuthi lesi sihloko mayelana nama-tattoos eglavu yesibhakela sikugqugquzele ukuthi uthole tattoo yakho elandelayo. Sitshele, ingabe unawo ama-tattoo afana nalawa? Kusho ukuthini kuwe? Kunjani? Ngaphezu kwalokho, sikushiyela igalari yezithombe ezingezansi ukuze uqedele ukukukhuthaza!
Izithombe ze-Boxing Gloves Tattoos
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni » Boxing amagilavu ​​tattoos, incazelo kanye nemibono
Ama-tattoos angaphandle, ugqozi oluvela emkhathini